Pope Francis ee Morocco, gacanta ku fidiyey diinta Islaamka iyo muhaajiriinta - TELES RELAY
ACCUEIL » International Pope Francis ee Morocco, gacanta ku fidiyey diinta Islaamka iyo muhaajiriinta
Pope Francis ee Morocco, gacanta ku fidiyey diinta Islaamka iyo muhaajiriinta
Pope Francis at Synod on Youth, 25 March 2019. TIZIANA FABI / AFP
booqashooyinka Pope Sabti iyo Axad 30 31 March si Morocco dalka Muslim, u doodista wada hadalka diimaha, booqasho gaaban in sidoo kale la kulmi doonaan tahriibayaal ah, sidaas isku laba mudnaanta ugu weyn ee uu pontificate.
Sidoo kale akhri Kalsooni darrada ka jirta kaniisadda Katooliga ayaa kordha
Boorashka Argentine wuxuu noqday khabiir ku takhasusay safarka bulshada adduunka ugu yar. Waxaa si xamaasad ah u sugaya bulsho ka weyn 30 000 aamin ah, badanaaba muwaadiniinta wadamada Afrika ee ka hooseeya sahanka, arday ama muhaajiriin u socdaalaya qaarada yurub.
About saddexaad ah iyaga ka mid ah ayaa la filayaa Sunday Mass ee adag ciyaaraha, maqal ah tan iyo booqashada of John Paul II, in 1985, wadankan in 99% Muslim (Sunni).
Siduu u safri lahaa Imaaraadka Imaaraadka Carabta bishii Janaayo, sawirka Pope ee u dabaaldegaya Mass, maalinta ka dambaysa kulan la leh King iyo "Taliyaha Mu'miniinta" Mohammed VI iyo hoggaamiyeyaasha diineed ee sare waxay soo bandhigi doonaan wejiga la taaban karo ee wicitaanada soo noqnoqonaya ee diidmada diinta.
Safarku wuxuu hoggaamiyaha ruuxiga ah ee 1,3 bilyan oo Catholics ah kicisaa rajada laga tirada badan yahay Christian iyo kuweeda Muslim, kuwaas oo doonaya in ay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​ka xoriyadda diinta ee Dastuurka Morocco.
"Waxaan ku riyooneynaa Morocco bilaash ah oo u maleynaya kala duwanaanta diimeed"ayaa sheegay in isku xirka Masiixiyiin Moroccan ah. Waxay rajaynaysaa in booqashadani ay noqon doonto "Fursad taariikhi ah" Morocco si loo horumariyo "Si macquul ah oo macquul ah".
Sida laga soo xigtay Dastuurka Morocco, "Islaamku waa diinta dawlad-goboleedka, kaas oo u damaanad qaadaya dhammaan jimicsiyada bilaashka ah". Xeerka Ciqaabta ee Morocco ma bixinayo ciqaabta dilka ee riddada diinta Islaamka, oo ka duwan, tusaale ahaan, mid ka mid ah Imaaraadka Carabta. Laakiin, Morocco, "Xukunka ciyaarta waa mid u gooni ah", ayaa sheegay in hoggaamiye diineed Rabat.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Deggannay fadeexadaha kaniisadda, Catholics waxay rabaan isbedel
Mawduucani waa mid xasaasi ah. Bishii Juun 2018, Wasiirka Xiriirka ee Xuquuqda Aadanaha ee Morocco, Islaamiyiinta Mustapha Ramid, ayaa dareensiyay in xorriyadda damiirka ahaa "Khatar" waayo, "Wadashaqeyn" ee Morocco.
Isbedelka iskaa-wax-u-qabsiga ahi ma aha dembi, laakiin waa xaqiiqo "Si aad u ruxayso iimaanka Muslinka ama diintiisa kale u beddesho") waxay ku kici karaan ilaa saddex sano oo xabsi ah. "Waxa la cambaareeyay waa ficil gardaro ah"wuxuu ku adkeeysanayaa danjiraha Boqortooyada Morocco ee Paris, Chakib Benmoussa.
Waayo, "Booqashada ee Pope Francis waa highlight a, iyo sidoo kale inay la diriraan hadda isweyneyn, xidhan, dulqaad, laakiin sidoo kale (...) ee dhexgalka wanaagsan u dhexeeya diimaha, dadka iyo ilbaxnimooyinka".
"Muhaajir badbaado leh"
Pope Francis ayaa ku kalsoon in uu jeclaan lahaa inuu tago Marrakech December Diisembar 2018 si uu u korsado wax ka badan wadamada 150 ee Heshiiska Caalamiga ah ee Qaxootiga ee Qaramada Midoobay. Ugu dambeyntii wuxuu ugu yeeray wakiil. Qoraalka aan xaddidneyn, oo ujeedkiisu yahay inuu xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee a "Muhaajir badbaado leh", ayaa ka raali noqdey dalal dhowr ah ka hor intii aan la ansaxin kama dambeys ah ee New York.
Francis ayaa la qorsheeyey inuu la kulmo soogalootiga sabtida ee xarunta Caritas Diocesan, halkaas oo uu ku bixin doono hadal. Kaniisada Katooliga ah ee degaanka ayaa xarumo ku leh soogalootiga qaxootiga ee ku yaala magaalooyinka Morocco, iyada oo maqnaanshaha dhismeyaal kale.
Sidoo kale akhri Pedophilia ee kaniisadda: Pope Francis diidan iscasilaadda Cardinal Barbarin
Arrinta muhaajiriinta waa arrin kale oo xasaasi ah oo ku yaala Morocco, taas oo sheeganaysa siyaasad soo dhaweyn leh "Bani'aadanimo". Laakiin Rabat waxa ay si joogto ah u hirgeliyaan difaacayaasha xuquuqda aadanaha, kuwaas oo dhaleeceeyay hirarka qabqabashada xooggan si ay uga tirtirto musharaxiinta ka baxsan xeebaha badda.
"Waxaan rajeynayaa in booqashadii Pope ay horumarin doonto arrintan"Archbishop Santiago Angelo Martinez, Archbishop of Tangier, ayaa sheegay in intii lagu jiray saxaafad dhawaan.
safarka ee Francis ee Morocco yimaado dhawaad ​​afar iyo soddon sannadood ka dib in John Paul II ee 1985 xagaaga, by shirka diimaha la 80 000 dadka dhalinyarada ah ee garoonka ku calaamadeysan. madaxa First of state ka dal Carabta in ay ugu yeedhi baadari ah, King Hassan II - Boqortooyada hadda aabihiis - ayaa la helay ee Vatican ee November 1991.
Ficil ama arag dhamaan faallooyinka
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/28/le-pape-francois-au-maroc-une-main-tendue-a-l-islam-et-aux-migrants_5442499_3212.html?xtmc=pape&xtcr=4
Bangiga maalgashiga Kenya ee Sterling Capital ayaa istiraatiijiyadiisa cusub bartilmaameedsanaya SMEs
Cameroon: Danjiraha Congolese oo ka careysiiyay wargeyska L'Avenir iyo Agaasimaha Daabacaadda